၂၀၁၂ အောက်တိုဘာ ၂၅ ရက်တွင်စတင်သည် NAB သတင်းများ | 25 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show LIVE ၏ထုတ်လုပ်သူ။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » သတင်း » Sigma fp သည်အောက်တိုဘာလ 25, 2019 တွင်စတင်တင်ပို့မည်
ကမ္ဘာ့အသေးငယ်ဆုံးနှင့်အပေါ့ပါးဆုံး Full-frame mirrorless ဒီဂျစ်တယ်ကင်မရာဖြစ်သော Sigma fp အတွက်စျေးနှုန်းကိုအမေရိကန်ဒေါ်လာ 1,899 USD ဖြင့်စတင်လိမ့်မည်။
Ronkonkoma, NY - အောက်တိုဘာ 10၊ 2019 - အမေရိက၏ Sigma ကော်ပိုရေးရှင်းကင်မရာ၊ ဓာတ်ပုံမှန်ဘီလူး၊ cine မှန်ဘီလူး၊ Flash နှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်သူများက၎င်း၏ full-frame mirrorless digital camera ကိုကြေငြာလိုက်သည်။ Sigma fp, အောက်တိုဘာလ 25, 2019 အပေါ်စတင်တင်ပို့ပါလိမ့်မယ်။ Sigma fp သည်ကင်မရာကိုယ်ထည်အတွက်ဒေါ်လာ 1,899 USD နှင့်ကင်မရာအတွက်ဒေါ်လာ 2,199 USD ဖြင့်ရောင်းချမည် Sigma 45mm F2.8 DG DN ခေတ်ပြိုင် လုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိ Sigma ရောင်းဝယ်သူများထံမှမှန်ဘီလူး။
Sigma fp အဓိကအကြောင်းအရာများ:
ကမ္ဘာ့အသေးငယ်ဆုံးနှင့်အပေါ့ဆုံး Full-Frame Mirrorless Camera
112.6 × 69.9 × 45.3mm အရွယ်အစားနှင့်ကိုယ်ထည်အလေးချိန် 370g နှင့်အတူ All-new Sigma fp သည်ကမ္ဘာ့အသေးငယ်ဆုံးနှင့်အပေါ့ပါးဆုံး full-frame mirrorless digital camera ဖြစ်သည်။ 24.6 megapixel Bayer full-frame sensor ကိုတပ်ဆင်ထားသည်။ စိတ်ရှည်သည်းခံမှုနှင့်အတူရည်ရွယ်ချက်ဖြင့်တည်ဆောက်ထားသောဖုန်မှုန့်နှင့် splash-proof body သည်ပစ်ခတ်မှုပတ် ၀ န်းကျင်အမျိုးမျိုးတွင်နာရီပေါင်းများစွာအတွက်စံနမူနာဖြစ်အောင်ပြုလုပ်ထားပြီးစက်မှုရှပ်တာမရှိခြင်းသည်ဆူညံသံနှင့်ရှပ်တာထိတ်လန့်ခြင်းအတွက်ယုံကြည်စိတ်ချရမှုတိုးစေသည်။
Dual-Purpose 12-bit CinemaDNG အထောက်အပံ့ဖြင့်
Sigma fp သည် RAW ဗွီဒီယိုဒေတာအတွက် 12-bit CinemaDNG ပြင်ပအသံဖမ်းခြင်းနှင့် 4K UHD / 24fps မှတ်တမ်းတင်ခြင်းကိုထောက်ပံ့ပြီးပြည့်စုံသောဗွီဒီယိုထုတ်လုပ်မှုကိုပြုလုပ်နိုင်သည်။ ရိုးရိုးရှင်းရှင်းခလုတ်ဖြင့်ရုပ်ငြိမ်ရိုက်ချက်များနှင့် cine shooting mode များအကြားရွေးချယ်နိုင်သည်။ mode တစ်ခုစီသည်အထူးဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသော operating system နှင့် display များပါ ၀ င်ပြီး mode တစ်ခုချင်းစီတွင် shooting ကိုအာရုံစိုက်ရန်စိတ်ဖိစီးမှုကင်းစေသည်။
Sigma fp တွင် L-mount ကိုအသုံးပြုသည်။ တိုတောင်းသောအနားကွပ် focal length၊ ကြီးမားသောအချင်းနှင့်သာလွန်သောကြာရှည်ခံမှုတို့ဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာရှိသည်။ Sigma မှန်ဘီလူးများ၏ကျယ်ပြန့်သောရွေးချယ်မှုများအပြင်အခြားထုတ်လုပ်သူများ၏မျက်ကပ်မှန်များကို Leica Camera AG နှင့် Panasonic Corporation တို့မှ L-Mount Alliance မှတစ်ဆင့်အသုံးပြုနိုင်သည်။ Sigma Mount Converter MC-21၊ Sigma SA Mount နှင့် Sigma တို့နှင့်အတူ ကို Canon EF mount မှန်ဘီလူးကိုလည်းသုံးနိုင်ပါတယ်။
အပိုဆောင်းအချက်အလက်များကို Sigma ဝက်ဘ်ဆိုက်တွင်တွေ့နိုင်သည်။ www.sigmaphoto.com/sigma-fp
PhotoPlus 2019 ရှိ Sigma fp ကိုကြည့်ပါ
Sigma ၏မှန်ဘီလူးအပြည့်အစုံအပြင်၊ နယူးယောက်မြို့ရှိ 2019 PhotoPlus Expo သို့တက်ရောက်သူများသည် Sigma ပြခန်းရှိ Sigma fp full-frame mirrorless digital camera အသစ်များကိုတွေ့မြင်နိုင်သည်။ #837 ။
ထို့အပြင်၊ ပြပွဲတွင် Sigma နှင့်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲကိုစီစဉ်ရန်စိတ်ဝင်စားသောစာနယ်ဇင်းအဖွဲ့ဝင်များသည် Nick Govoni (ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်သည်) ([အီးမေးလျ protected]).
လက်မှုပညာ။ တိကျစွာ။ အပျနှံ။ 1961 မှ စတင်၍ SIGMA သည်ဓာတ်ပုံပညာဆိုင်ရာနည်းပညာတိုးတက်စေရန်ကြိုးပမ်းခဲ့သည်။ စက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်ထူးခြားသည့်မိသားစုပိုင်စီးပွားရေးသည် Aizu, Japan, Aizu တွင်တည်ရှိသည့်၎င်း၏အဆင့်မြင့်ထုတ်လုပ်မှုစက်ရုံမှအရည်အသွေးမြင့်ပြီးဆုရဓာတ်ပုံနှင့်ရုပ်ရှင်ရုံကင်မရာမှန်ဘီလူး၊ mirrorless ကင်မရာများ၊ တောက်ပမှုများ၊ filter များနှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများကိုထုတ်လုပ်သည်။ ။
2012 တွင် SIGMA Global Vision ကို Art, Contemporary နှင့် Sports သုံးခုဖြင့်မိတ်ဆက်ခဲ့သည်။ အပါအဝင်စက်မှုလုပ်ငန်းကင်မရာ mount စနစ်များအတွက်ဒီဇိုင်း ကို Canon, Nikon, Olympus, Sony က SIGMA နှင့်မှန်ဘီလူးတစ်ခုချင်းစီသည်ဂျပန်နိုင်ငံတွင် ရည်ရွယ်၍ တည်ဆောက်ထားသည့်စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားသောအရည်အသွေးမြင့်ထုတ်ကုန်တစ်ခုသေချာစေရန် handcrafted နှင့်စမ်းသပ်ထားခြင်းဖြစ်သည်။ 2016 တွင် SIGMA သည်ရုပ်ရှင်မှန်ဘီလူးထုတ်လုပ်မှုလောကသို့ ၀ င်ရောက်ခဲ့သည်။ SIGMA ၏ထူးခြားချက်စံနှုန်းကိုသတ်မှတ်ပေးသောအဓိက optical DNA ကို အသုံးပြု၍ cine မှန်ဘီလူးများသည်အဆင့်မြင့် 6k နှင့် 8k ရုပ်ရှင်ရုံထုတ်လုပ်မှု၏လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းပေးသည်။
2018 ရှိ Leica နှင့် Panasonic တို့နှင့်အတူ L-Mount မဟာမိတ်ဖွဲ့ခြင်းအားဖြင့် SIGMA သည်ဇူလိုင်လ 2019 တွင်ကြေငြာခဲ့သောဇာတိ L-Mount Sigma fp full-frame mirrorless digital camera ကဲ့သို့သောတီထွင်ဆန်းသစ်မှုများမှတဆင့်ထူးကဲကောင်းမွန်သောပုံရိပ်များကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားသည်။ fp ကိုစတင်မိတ်ဆက်ခြင်းနှင့်အတူ 14 ဆုရ SIGMA Global Vision မှန်ဘီလူးများကိုဇာတိ L-Mount ပုံစံဖြင့်ရရှိခြင်းနှင့်အတူ SIGMA သည်ထုတ်ကုန်များတိုးချဲ့ထုတ်လုပ်မှုတိုးချဲ့ခြင်းဖြင့်တီထွင်မှုအသိုင်းအဝိုင်းအပေါ်ဆက်လက်တည်ရှိနေမှုကိုပြသသည်။ fp နှင့်ဤမှန်ဘီလူးများဖြင့်ယခုအခါ SIGMA ၏ကျော်ကြားသောပုံသေနည်းကိုလွယ်ကူစွာလွယ်ကူစွာရရှိနိုင်ရန် shooters များပင်ယခုအခါ ပို၍ အသုံးချနိုင်သည်။
SIGMA အကြောင်းသိလိုလျှင် ကျေးဇူးပြု၍ သွားပါ www.sigmaphoto.com ဒါမှမဟုတ်ကုမ္ပဏီအပေါ်ကိုလိုက်နာ SIGMA ဘလော့ဂ်, တွစ်တာ, Instagram ကို နှင့် Facebook က.
ဂရေဟမ်ချပ်မန်း Prmoted toEditor SoftAtHome, MStar, CES2017 လှံ & Arrows က Ultra HD ဖိုရမ် 2019-10-10
ယခင်: Facilis သည် NAB NY ရှိနောက်မျိုးဆက် HUB Shared Storage System ကိုပြသသည်
နောက်တစ်ခု: TEDial သည် SMARTLIVE အားကစားပုံစံအမျိုးမျိုးဖြင့်အားကစားထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့် NAB New York 2019 တွင်ဗားရှင်းစက်ရုံအဆင့်မြှင့်တင်ခြင်းနှင့်မီဒီယာအကြောင်းအရာဖြန့်ဝေခြင်းနှင့်ပတ်သက်သည်။